Saxiibaday oo hadashay(my friend speaks) – convosfromwithin
Saxiibaday oo hadashay(my friend speaks)
Posted byMuni_Mar	 15. November 2020 15. November 2020 Leave a comment on Saxiibaday oo hadashay(my friend speaks)
Below is a friend’s story, she wrote it in Somali. I’m proud of her for writing and sharing it with us.
Horta inta aanan wax faafin dheer ah sii galin, waa inaan is amaano, waayo?
• Waxaan ahay hooyo adag oo nolosheeda maarmeeysay
• Shaqo aan kufarax sanahay ayaan bishan helay. Guri, gaari iyo waxii kale oon rabo nolon maarkeedkayga waan haysta. Ilahaay mahada asaga ha, ahaato.
Ilaahay wuu ila garab galay dhinac kasta oon nonolshayda kusaabsan. Ha ahaato korinta wiilkayga. Wadankan waxaan soo galay anoo ah 17 jir. 19 jirna markaan ahaa waxaa laigu daray wiilkeyga aabahiisa. Markaan ahaa 21 jir, waxaa waxaan aduunka keenay willkayga, isla sanadkaasna waxaan noqday hooyo kaligeed ah. Maadaama aan ardaydii aan skolka ladhigan hayay, aan kadib dhacay, sababto ah inaan xaas iyo uur noqday. Nolosha waxay isku badashay inaan reer dhaqdo. Anigoo goaansaday in aan isku wado skolka iyo noloshayda cusub, sanadka markuu ahaa 2009 ayaan waxaan ogaaday in naag laiga daba keenay. Wali xitaa aniga aanan noloshayda cusub aanan kufarax saneen oo isku dayaya siaan ula qabsado. Ninkaygii waxaa lagu daray naag habaryartii dhashay oo wadankiisii joogta. Hab dhaqameedkiisii oo isbadalay.
• Waxuu bilaabay inuu iga dhadhiciyo `Habibti , af carabiga waxaa weeye walaasha xitaa waa lagu dhihi karaa! ( maadaama aan kuqabtay talefan asago dhahaya habibti naag kale.) karka suashayda ayaa waxay ahayd maxaad oogu dhihi waxsay walaalahaa ereygaas manta kahor? Iyo talefankii oo lajaray! Aniga meshi wax cadayn ah maadaama aanan kuhaynin waan iska aamusay. Lakiin dhagahayga weey iitaagmeen.
• Marka labaad ee shakigayga sii batay ayaa waxay ahayd. Hadiyad lasoo diray oo asaga dhar loosoo diray anigana laiisoo dhax galiyay rajabeeto asalkeedi cadayd, lakiin dhooqo lasoo dhax galiyay oo ay dhooqadii kuqalashay. Asaga laftiisa uu naxay oo intuu dafay yiri, wuu ooga dhax dhacay marka alaabta lasoo dirayay! Waxaas dhan anoo iska indha tiraya, maadaama aan furniin kacabsado oo wax ceeb ah yahay. Ayuu waxu bilaabay inuu lacag diro, hebel iyo hebla ayaa xanuunsan. Tiina wax dhib ah oo saas uweyn kama keenin, oo waxaan isdhahay inuu yahay ninkii kaligiis reerka kasoo baxay oo qurbaha kasoo aaday marka afaf badan ayaa laga rabaa inuu quudiyo ayaan niyada gashtay. Oo dee ruuxa ilaahay kuu calfay inaad dulqaad uyeelato weeye baan iska dhaadhiciyay.
• Shekadaas waxaa sii dheereeeysay inuu saf safro, oo dhulkiisii aado. Taasna waxaay ahayd caadi, safarkii ninka wuuba soo cayilay. Waa ninkii diidanaa hilib inuu koro. Sadax usbuuc uu kumaqnaa ehelkiisa. waxaan kudhahay ninyahoow waad soo cayishaye waa sidee? Afkiisa waxaa halmar kasoo booday, cunto uun baan cunayay. Hebla aad bey uconto macaantahay. Iyo dee nin wax kale so arkay inuu yahay waan ka arkay hab dhaqa meedka jirkiisa marka uu kasheekeen hayo. Aniga hadalkii baa igu dhagay. Indhaha Ayaan kaeegay. Markaas Ayaan halmar isla qosolnay. Asaga qosolkiisa waxuu ahaa qosol gariir. Kayga lakiin waxaa ii cadaaday shakigaygii inuu run yahay. Suaasha aan weeydiiayay baa waxay ahayd. Markaas aniga waxaan karin hayay qado. Hoowshaydii ayaan iska sii watay. Asagana qolka ayuu galay hurdo culus ayuu kasoo goay. Anigana banaanka xanaanada ayaan aaday oo waxaan doontay inlahaygii. wadada intaan sii socday ayaan oohin dhameestay. Tiix tiixa barafka wajigayga kudhacayay ayaa qariyay ilintayda. Markaan oohin dhameestay, goaan kayga ugu adkaa ayaan gaaray. Suuqa ayaan sii maray oo adeed aad ufara badan ayan soo adeegay.
• Waa dagaalka koobaad een qaaday. Aniga masoo adeegan jirin. Asaga ayaa adeega waxaan ubaahnaa iisoo gadi jiray. Lacagta aad ayuu u ilaalin jiray, waanan kufaraxsanaa. Lakiin maadaama dhusadii laigu soo cariiriyay anigana waxaan bilaabay inaan hooshoos kadagaaltamo. Markaan soo noqday ayaa waxan soo galay kii oo salaada casar tukan haya. Ilmaha ayaan fadhiisistay. Waan so weeseystay kadibna salaada ayaan dhinac kala galay. Kadibna qadadii ayaan sooriday. Afka markuu saas ugashtay qaandadii oogu horeeysay ayuu waxu galay amaan culus. Ood aragto ineey tahay been iyo aabaheed. Waxna madhihin, waqtigii jiifka markii lagaaray ayaan seexsaday cunuga. Kadibna qubees ayaan aaday. Waxaan dhahay, dhanka sariistana tolow miyeey iga hdeereeysaa, tolow cuntadii weeyba amaanantahaye. Dhankaas waan hubsaday in uu kadiyaarsan yahay dhankeeyga. Lakiin, aniga goaan kayga waa kayga. Waagii ayaa baryay.
Aargoosasho ayaan udiyaar garoobay.
Hada waxaan rabaa in aan afkiisa xaqiiqda kahelo, waxaan kudhahay, maanta guriga ayaan joogeeynaa oo wax asxaab ah aadi maysid. Oo wuu ihga ogolaaday. Tvga ayaan shidanay. Waxaan ugeeyay filin carabi ah oo nin 4 naag isla qaba. (filin qadiimi ah oo masri ah) wuu ladhacay sida fiican uu ninka naagaha ukala wado. Waann dhamees tiranay filinkii.
Waxaan kudhahay, ninkaas adiga ma,ahan. Afarta naagna xoolo kufilan ayuu uhaayaa, adiga sideed labo naag kuwadi doontaa, biilkeeniina waad diryaa oo reerka ayaad udirtaaye?
Inkiraad ayuu raaxada iiga qaaday. Hooyo gabadh eey habaryar utahay oo madi ah ayaa soo raacday marka aan reerka soo booqan hayay oo cuntada reerka ayadaa ukarineysay marka taas cunytadeeda baa macaaneed ayuu yiri, meel cidla ah haka maseerin Habiibti!
Marka intaas uu sheegay naagta cuntada karineeysa in laiixaqiijiyo ayaa igu filneed suaalo kale maweydiinin. Reerkaygii aniga idhalay weey ogyihiin naagta, ( ama hooyadeey aanba dhaho) lakiin siay wax iigu sheegaan magaran hayaan. Oo markii hore laiaroosayay ayaa waxaa goaanka ahaa aniga, waadba igu darteene,oo waan aqbali goaankiina, lakiin naalinka uu naag kale keeno aniga ayaa baxaya. Hooyadeeyna way ogtahay goaan adeegayga. Waxaan ismaa weelin hayay mudo shan bilood ah. Waqtigii qaboobka waa laga gudbay oo hada kuleelkii baa noo bilaabday. maalin waxaan lasugay uu aad ufaraxsan yahay oo loo ogolaaday wax uu in muda ah jawaab kasugagay, waxaan diidanaa inaan dagaal kadhax kiciyo asagoo arimahiisa uhirgalin. Waxaan kudhahay, maxasuusataa balanteenii ahayd. Hadii aad naag ila aroosto waad ifuri? Intuu neef tuuray ayuu yiri, HAA. Markaas ayaan waxa kudhahay. Sida ay wax ujiraan iisheeg. Intuu orday oo dharkiisii configa ahaa iska soo furay oo sidii askari isasoo xirxiray ayuu yiri waxaad kahadlayso magaran hayo. Anina waxaan kudhahay sidaas haday tahay, reerkayagii ayaan aadayaa. Hooyaday ayaan utagay arinkii usheegay, markaas bey tiri hooyo hadaad adigaba dareentay, arinkan shuxshuxdiisa ayaa isoo gaartaye, bal furniin hakuordine, ee xal baa laheliye isdaji. Aniga hooyoday aad ayaan ooga niyad jabay laakiin waxba ma aanan dareensiin. Waxaan kuiri, wiilka iihay caasimada ayaan aadayaaye. Wiilkii aabihiis ayaa kasoo doontay anigana habaryartay ayaan aaday. Siaan xaalada wax kaduwan uarko. Bal xan iyo biliaadankale kumashquulo! Habaryarna xantii magaalada ayadaa haysa, marka isla qosolkaas iyo dadkaas kale warkooda ayaan kadoontay. Awalna maba jecleen inaan kadhageesto. Labadii maalmood een maqnaa willkayga ayaan uxiisay. Oo markaan soo noqday, waxaan kudhahay ninkii, wiilkayga ayaan rabaaye isii. Hooyaday baan aadayaaye. Waxuu iigu jawaabay. Waxaad sameeneeso xaalad adag ayaad nagu wadaa. Waxaa kudhahay, haa afkaada adaa katiri. Ee furniin baan rabaa. Maalinka furniin baan rabaa afkayga kasoo baxay, weey iiga ekeed, oo kasoo noqod malaheen. Lianu, inmuda ah ayaan falanqeen hayay oon goaaminayay. ninkii ehelkiisa oo caasimada dagan ayuu aaday. Halkaas ayuu ladagay. Maadama aan goaankayga gaaray oo uusan waxkasta uu isku dayo aan kasoo noqoneenin. Mudo lix bilood ah ayuu maqnaa. Lixdaas bilood gudaheeda waxaan kubartay gaariga sida loowado. Imtixaano dugsiga sare oo aan horey oogu dhacay ayaan kuguulaystay. Nolosha cusub baan laqabsaday. Lakiin waxaan uxiisay adeegii laiisoo adeegi jiray iyo qashinka laiga tuuri jiray. Markuu soo noqday o uu isyiri weey dagtaye bal hada kawardoon, ileene furihii guriga wuu heestaaye. Wuu ibaryay, aniga wax dareen ah iyo wax isbadal ah waan iska waayey. Dabcan xalaashiisa waan ahaa oo uma diidin xaqiisa. Waxaan maalinkii danbe booqasho kuaaday, reer qaraabada ah oo islaanta gurigaas mar iibalan qaaday ineey ibarto rootiga sida lookariyo oo iiyeertay. Markii aan bartay ayaa waxaan fadhiisanay fadhigii. Duqa reerka ayaa waxuu iyiri, adeer ninkii waad soo celisay baan maqlaye wax fiican baad sameesay, wiilka aabahiis haka fogeen.
Waxaan oogu jawaabay adeer, ninka heshiiskeena baa ahaa haduu naag kale iga daba keeno inuu ifurayo. Naagtii kale baan furi buu leeyahay. Marka naag la,aan inteey kudhici laheed naagtiisaas haheesto aniga in laiga furo baan rabaa. Adeerkan maadaama uu yahay duqa kali eh ee ehel iigu dhaw asaga ayaan kucalaacalay. Talo ayuu isiiyay ah gurigaada kunoqo, laba rakcad tuko ilaahay bari. Waxaad kuqaboobto adeer samee. Hadaad rabto inlagaa furo ood soo goaansato hadee waan kaafureeyna.
Ninkii hadana waan isku dhacnay, oo meshiisi buu kunoqday. Markaan waxuu iska maqna shan bilood. Oo reer ayuu dulsaar kuahaa qaraabadiisa ah. Duqii ayaan kudhahay adeer fadlan iga fura ninka. Talo ayuu isiiyay. A very old talo. Waxuu yiri marka danbe uu soo noqdo. Wax isbadal ah yuusan kaa dareemin, naag reerkeeda dhaqaneeso ahoow. Maadaama uu marwalba cararayo. Waan kasoo duldheceenaa asagoo fadhiyo, Marka sikale oon warqada ooga qaato waan garan waayay, xalkaas ayaa kii ugu wanaagsanaa noqday. Marka wax walba ayaan usameeyay oo wuu fajacay, o habibti waa ilaahay mahadiisa shaydaankii kuhayay haduu kaabaxay kulahaa, naagnimadeeyda tii oogu danbeesayna wuu helay, cuntaan ukariyay guri udgoon, wiilkiisa iskala ciyaarayo. Confi dharkiisa qabo. Filink carab eh. Ayaa guriga noogu yimid. Wuu so dhaweeyay. Shaax usoo samee buu igu yiri. Waan usoo sameeyay. Waxaan kuugu nimd gabadha inaad noo furto, ayaa lagu dhahay. Intuu shaydaanka iska naaray buu qolka kuorday oo dharkii configa ahaa iska soo badalay oo askari camal usoo labistay. Inuu ismamajiiro buu isku dayay. Waxuu yiri wiilka haisiiso markaas waan furi. Qaado ayaa lagu dhahay, meherka haicafiso, makaarabto ayaa logu jawaabay. Kabahiisa intuu xidhay ayuu hadana cararay. Markaan 1 sano ayuu iska maqnaa oo. Taleenkeeygana wuu igu soo dhibay. Markuu soonoqoday markaan asagoo dadkiisa wata ayuu yiri inaan furo marabo, halaigala hadlo, masjidkiina badh oo badh soo kaxeestay.
Wax aan kuhadlo waan garan waayay. Maalin jimco an carab iyo cajab ilinkayga buuxdo, garbasaar soo qaado waan badan nahaye laidhahay asagana gadaashooda taagan yahay. Wadaadii warkooda waan dhagaystay, guriga ayaan soo galiyay ninkii. Waxaan isku dayay inaan bal ilaahay baaqoray dhaho oon iska dulqaato. Lakiin, waxuu kudhaartay inuu furo naagta kale. Wuu wacay, waxuu kuyiri, waan kufuri, naagtayda ayaan rabaa, codkeeda daciifka ah markaan maqlay ayaan maskiinta uwalbahaaray. Intaan ooyay ayaan banaaka iska aaday. Goaankaygii aniga halaifuro ayaa sii xoogeestay. Lakiin asaga markaas waxba umasheegin. Mudo afar bilood ah ayaa kasoo wareegtay, ninkii waan lanoolaan waayay. Ifur hadaad ifuriwayso haiga isku meel kuma noolaaneeyno baan kudhahay. Naagtiina utag aniga kuu naagoobi maayo hada kadib. Ninkii mudo halsano kabacdi suu umaqnaa yiri hayeh hada waan kufuri. Dad ayuu balansaday. Waxuu yiri aniga inaan kufuro marabee, fadlan sheydaanka iska naar. Maalinkaas waxaan joogay carwada caruurta kuciyaarto. Waxaan iri inaad ifurto ayaan rabaaye haigu dhibin. Marka, raga dhaxdooda kaooyay oo yiri, cuntadeedi, nadaafadeedi, wiilkayga hooyadiis waan uxiisi doonaa. Talefanka waa laigu jaray. Shekha ayaa waxuu yiri adeer ninku musqusha ayuu kudhax oonayaaye, adeeray aan kuuduceenee furniinka iska dhaaf. Maya madhaafayo baan kudhahay, ee hala imaqashiiyo. Acuudubilaah waxu madax adagaa kulahaa odaygii. Furniinkeeyga sidaas baan kumaqlay. Waan farxay waana naxay, waxaan lafarxay in uu ifuray, waxaan lanaxayse waan garan waayay.
Nolashayda maanta waxaan aad oogu faraxsanahay inaan ahay, qof isku filan, cafimaad taam ah ilaahay isiiyay. Ilaahay ayaana mahad iska leh inaan ahay qofta aan ahay. Lakiin waalidiinta soomaalida ah. Ineey iska daayaan ineey gabdhahooda guurka ugoaamiyaan oo ayadooon diyaar ahayn nin lagu daro. Ninka waxay kala kulmeeso maogidiin. Aniga sida igudhacday ookale. Nin aan diyaar uaheen laigu daray, markaan isasiiyayna uu naagkale dhudhumasho kuaroosay. Marka ilmahiina khaladaadkooda ayaka hasameeyaan oo ayaka wax hakabartaan. Waayo qofkale oo eey dhahayaan wadada ayaad iga lumisay majiro. Lakiin aniga mudo sanada ah waxaan eeda saarayay hooyaday iyo ehelkeeyga. Lakiin wax walba qofkal biliaadanka ah uqoran ineey kudhacaan wuu kudhici. Midani waxeey aheed aniga tii iiqorneeyd. Alhamdoulillah. Toban sano ayaa kasoo wareegay furniinkeeygii, walina ninkale maguursan. Guur dhan ayaan kasasay. Hadana uma niyad hayo wali.
Posted byMuni_Mar 15. November 2020 15. November 2020 Posted inQoraalo af Somaali, Stories
Ajaib full of wonders
“you show me that you don’t need me,” he said frustrated. And it was true! No matter how in pain I was, I would never beg for help! Because that is what comes after asking! You ask for help, when you are dismissed you have to beg. And I had promised myself never to beg […]